DRC oo Odayaal iyo waxgarad Tababar uga Furmay magaalada Gaalkacyo +Sawiro – SBC
DRC oo Odayaal iyo waxgarad Tababar uga Furmay magaalada Gaalkacyo +Sawiro
Waxaa manta isku keentay wagaradka gobolka mudug hay,ada DRC aydoo aygoob joog ahaayeen masuuliyinta maamulka dagmada gaalkacyo waxaana qeeybka aheeyd.
Tabarkana ayaa waxaa lagu baranayey ilaalinta iyo dhawrista baaqii odayasha ee kasoo baxay magalada garowe ee casumada dawlada puntland waxaana lagu samaynayey dib u eegid lagu saxayo waxyaalaha u baahan in waxlaga bedelo iyo kuwa u baahan in lagu soo kordhiyo sidoo kale waxaa qodobada dib u eegida lagu samaynayo kamid ahaa dhawrista xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta dadka laga tirabadan yahay kuwa barakacayaasha ah .
Siminaarka ayaa Dadka ka qayb galay tirdoodu ay dhamayd 60 Qof oo ay kamid yihiin gudoomiyaasha shankaam oo kamid ah kaamamka Barakacayaasha Magalada Gaalkacyo iyo Ururadda Dhalinyarada,Ururda Haweenka qaybo kasocday.
Tabarkaas lamid ah ayaa hay,ada DRC ay u qabatay 25 Qof oo ah Gabdho kamid ah Gudiga Nabadgalaya Magalada Gaalkacyo.
Ugu Danbayn dadkan Tabarka loo furay ayaa tiradoodu guud ay dhantahay 85 Qof oo ka kala socday qaybaha kaladuwan ee magalada gaalkacyo maahan markii ugu horaysay ee tabarkan oo kale laga qabta magalada gaalkacyo sanadkasta ayaa hayda ay uqabataah waxgaradka magalada gaalkacyo tabar ay isugu gudbinayaan aqoontooda lagana tashada xalaada ka jira gobolka mudug sida amanka ilaalinta deegan iyo dhawrista xuquuqda aadanaha,barakacayaasha.